Mo Farah oo Labeystey Xulafadiina Dhinac Iska Dhigey
Olympic Stadium-London-July-11-2012-Saaxiibayaaal barnaamijkeena ciyaaraha waxaynu ku soo qaadaneynaa dabacan orodka 5000 ee mitir oo aan waxaba la isu reeban.
Mo Farah oo sita wargeyska Somali Canadian Times & Buuga Ila Qosol
Markii aan qorayey qoraalkan waxaa iskugu keydarsame faraxad bood-bood-bood iyo gacmaha aan wax ku qorayey oo runtii i gariirayey waayo faraxdii iyaa iga badbadatey markii aan arkey walaalkey Mo Farah oo xadhigii jarey.
Haddab bakhyaartaay ordku markii uu bilowdey itoobiyaankii iyo kiiniyaankii oo waxala waxey reebteen aan jirin kana qiiqeysa jabkii ka qabsadey orodkii 10,ooo-kun ee mitir ayaa orodku ku bilowdey qabow garabkana la isku hayey.
Mo Farah mar uu booqasho ku yimid Toronto, Canada
Sheekadu waxay isbadeshey markii aay itoobiyaanku iyo kuwa Kiiniya ku ordeen si xawli ah laakiin halyeygu Mo Farah oo ku jirey xagga dambe ayaa wareegii 7-aad la soo simmey.
Walaalayaal filimka oo dhami wuxuu isbadeley 4-tii wareeg ee ugu dambeeyey oo runtii aan waxba la isu reeban mxaan war aankuugu daalin 300-ee ugu dambeeyey iyaa lakala miirmey waxaana si xalad leh oo uu sheydaanku ka naaran yahay ku guuleystey Mohamed Farah.